Nankatoavin’ny parlemantan’i Singapaoro ny lalàna “miady amin’ny vaovao faikany” — hanakona ny fahalalahana miteny ve izany? · Global Voices teny Malagasy
Avelan'ny lalàna ny minisitra no manapa-kevitra amin'ny atao hoe "diso"
Voadika ny 23 Mey 2019 5:41 GMT
Nandany ny Lalàna mifehy ny Hosoka sy ny Fanodinkodinana Antserasera ny parlemantan'i Singapaoro tamin'ny 8 May 2019, tao anatin'ny ahiahy fa ahitana fepetra manohintohina ny fahalalahana miteny izany. Saripika avy amin'ilay mpampiasa Flickr, Teddy Sipaseuth (CC BY-SA 2.0)
Nolanian'ny parlemantan'i Singapaoro ny Lalàna mifehy ny Hosoka sy ny Fanodinkodinana Antserasera (POFMA) tamin'ny 8 May 2019.
Fantatra amin'ny anarana hoe lalàna miady amin'ny vaovao hosoka, manome fahefana midadasika tsy voafaritra ho an'ireo minisitry ny governemanta ny POFMA mba hamaritra izay fampahalalam-baovao amin'ny aterineto “diso” ary mangataka azy mba ho sivanina na hahitsy.
Milaza ny Minisiteran'ny Lalàna fa hanampy amin'ny fanakanana ny fivezivezen'ny “lainga alefa fanahy iniana amin'ny aterineto” izay lazainy fa ampiasaina “hampizarazara ny fiarahamonina, hanaparitaka fankahalana, sy hampihena ny rafitra demaokratika” ny lalàna.
Saingy mahita ny vondrona media sy ny mpiaro ny zon'olombelona fa fitaovana iray hafa hanafoanana ny fahalalahana miteny ao Singapaoro ilay lalàna. Hanan-kery eo amin'ny sehatra nasionaly izay efa ahitana fahalalahana miteny eo ambany fandrahonana ilay lalàna, araka ny hita tamin'ireo fitarainana fanalam-baraka marobe vao haingana hanenjehina ny fampitam-baovao mahaleotena sy ireo mpaneho hevitra.
Niadian-kevitra nandritra ny fivorian'ny komity parlemantera tamin'ny taona 2018 ilay volavolan-dalàna natao hiadiana amin'ireo vaovao diso. Nampahafantarina tao amin'ny parlemanta tamin'ny 1 Aprily 2019 ny POFMA. Nifidy izany ireo mpikambana 72 tao amin'ny parlemanta raha nitsipaka kosa ny sivy .
Eo ambany lalàna, afaka manery ireo mpitantana tranonkala, ireo mpanome tolotra aterineto, eny fa na ireo karajia any antakonana aza mba hanitsy avy hatrany ny ‘vaovao faikany’ avy amin'ny sehatr'izy ireo. Saingy manjavozavo tanteraka ny famaritana ny zavatra iray ho faikany na diso.
Milaza ny andininy faha-2 fa “mety ho diso ny fanambarana raha toa ka diso na mitarika ho amin'ny fahadisoana, manontolo na ampahany, ary na ao aminy ihany na amin'ny tokotanin-tsehatra ahitana azy.”
Ny antokon'ny solombavambahoaka tsy miankina amin'ny antokon-draharaha Leon Perera dia Nanondro zavatra telo lazain'ny lalàna ho azo ampiasaina hanakonana ny zon'ny fahalalahana maneho hevitra ny depioten'ny Antokon'ny Mpiasa tsy avy amin'ny fari-pifidianana Leon Perera:
Fizarana 2 – famaritana ho azo ahitsy ny zavatra lazain'ny Minisitra iray heverina ho tsy manolotra ny zavamisy, tsy ny filazana diso ny zava-misy ihany;
Fizarana faha-4 (f) mamaritra lainga mampidi-doza, anisan'izany ireo mampihena ny fitokisana amin'ny governemanta; ary
Fizarana faha-6, izay mametraka ny Minisitra ho toy ny mpanapa-kevitra voalohany amin'ny hoe marina sy ny lainga.
Ny tetikasan'ny Oniversiten'i Oxford any atsimo atsinanan'i Azia, Thum Ping Tjin, nanazava ny fomba mety hitarika ny sivana amin'ny fomba fiteny manjavozavo amin'ny sokajy 4 (f):
Raha mitsikera ny governemanta ianao, na dia tsikera ara-drariny aza izy ireo dia afaka miady hevitra fa ny tsikera dia manjaka ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny governemanta. Manameloka tanteraka ny tsikera rehetra ataon'ny governemanta izany.
Tao amin'ny famoahana gazety, nanazava ny Minisiteran'ny Lalàna fa ny lalàna dia tsy mahasahana ny hevitra, tsikera, satirika na parody. Nanitrikitrika izy fa tsy famaizan-keloka bevava ny fanitsiana, ary “ireo izay manimba ny fiarahamonina amin'ny fampiasana lainga ihany no henjehina amin'ny heloka bevava.”
Nanantitrantitra ihany koa ny Ministera “tsy hisy fiantraikany amin'ny ankamaroan'ny olom-pirenena” ny lalàna, ary iankinan'ny ain'ny lalàna, ary mihevitra hoe:
Hiantoka izany fa tsy ho rendriky ny lainga antserasera ny kabary sy ny hevitra fanta-pototra, ka hoe hanohintohina ny dingana ara-demaokratika sy ny fiarahamonina. Ny tanjona dia ny hametraka fepetra ho an'ireo Singapaoreana, amin'ny maha-olona sy fiarahamonina sivika, mba hanangana lahateny mahasoa sy mafonja, mahalala ny zava-misy.
Nanamafy ny Minisitry ny lalàna sy ny Raharaha anatiny, K Shanmugam nandritra ny fivorian'ny parlemantera mialoha latsabato fa ny “lainga, ny roboto, ny fandotoana rindrina ary ny kaonty hosoka” ihany no ho voakasik'ilay lalàna fa tsy ny fahalalaham-pitenenana. Nanazava ihany koa izy fa manampy amin'ny mangarahara ny fanitsiana takian'ny minisitry ny governemanta:
Mametraka lahatsoratra ianao, ary milaza ny governemanta fa tsy marina izany. Mitondra fanitsiana amin'izany ianao (ary) mamela ny mpamaky anao hitsara. Inona no olana? Mangarahara kokoa, tsara kokoa.
Tamin'ny taratasy nalefa any amin'ny praiminisitr'i Singapaoro, naneho ny ahiahiny momba ireo fehezan-dalàna sasany ny mpitati-baovao manokan'ny firenena mikambana misahana ny fampiroboroboana sy fiarovana ny zo ho an'ny fahalalahana haneho hevitra sy hiteny , David Kaye.
… manolotra fahefana tafahoatra ho an'ireo manampahefana mpanatanteraka voafantina ilay volavolan-dalàna mba hametra, hanivana sy hanasazy ny fanehoan-kevitra antserasera lazainy fa “diso”, sady voafetra ny fahafahana mampakatra ny raharaha.
… Manahy aho fa hitarika any amin'ny fanamelohana sy fanafoanana ny fitondrantena tia maneho hevitra maro samihafa ity famaritana diso midadasika ity, ka anisan'izany ny fanakianana ny governemanta, ary ny fanehoana hevitra tsy mifanaraka, mifanohitra na hevitra vitsy an'isa.
Mpanao gazety maromaro no nanasonia fanambaràna iombonana manazava ny ahiahin'izy ireo momba ny lalàna:
Raha tsy mahavita manavaka ny lainga misy fikasan-dratsy sy ny fahadisoana tokoa, mametraka enta-mavesatra tsy amin'ny antony amin'ireo mpanao gazety miasa am-pahamarinana ity volavolan-dalàna ity. Hanakana kokoa ny fivezivezen'ny vaovao marina ny lalàna toy izany fa tsy mandrisika azy. Mety hahatsiaro voatery hitazona tantara manan-danja ireo fikambanam-baovao satria tsy azo hamarinina tanteraka ireo zava-misy sasany
Nampitandrina ny Fikambanan'ny Gazety Azia Atsimo-Atsinanana fa mety hametra bebe kokoa ny fahalalahan'ny gazety ao amin'ny firenena ny POFMA
Mampiseho mazava ny volavolan-dalàna fa mametraka ny tenany ho mpitsara ny marina sy ny lainga ny governemanta -volavolan-dalàna hita fa mampidi-doza, indrindra ho an'ny fiarahamonina izay efa feno andiana lalàna manafay
Mpanao gazety monina any Singapaoro, Kirsten Han, izay sady mpandray anjara ato amin'ny Global Voices, nanampy fa mety ho fitaovana hafa ho an'ny Antokon'ny Hetsi-bahoaka mba hampangina ireo mpitsikera ny governemanta ny POFMA:
Heverina ho fitaovam-piadiana hafa eo ampelatanan'ny governemanta PAP mba hamelezana ireo mpitsikera azy ny POFMA … Midadasika loatra ny fehezan-tenin'ny lalàna amin'ny fanomezana safidy ny minisitra mba hikendry amim-pifantenana ireo kendrena manokana.
Teo amin'ny fitondrana Singapaoreana nanomboka tamin'ny faramparan'ny taompolo 1950s ny antokon'ny fitondrana, PAP
Miahiahy ihany koa ireo orinasan'ny teknolojia, Facebook sy Google mikasika ny fiantraikan'ny lalàna vaovao. Nilaza ny Google fa mety “hanohintohina ny zava-baovao sy ny fitomboan'ny tontolon'ny vaovao nomerika” ao Singapaoro sy ny faritra Aziatika Atsimo atsinana ny lalàna.
Nilaza i Jeff Paine ao amin'ny Fikambanan'ny aterineto Azia fa mety ampiasaina toy ny maodely any amin'ny firenen-kafa ny POFMA:
Amin'ny maha lalàna mety ho lasa lavitra amin'izao fotoana izao, mametraka loza goavana ho an'ny fahalalahana miteny sy maneho hevitra ity lalàna lava tanana ity ary mety hisy voka-dratsy lehibe ao Singapaoro sy manerana izao tontolo izao.